७ सिट गुमाए पनि एमाले नै पहिलो दल, नेताहरु सबै चकित — Imandarmedia.com
७ सिट गुमाए पनि एमाले नै पहिलो दल, नेताहरु सबै चकित
काठमाडौ। राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि बुधबार भएको १९ पदको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको छ। यति गर्दा पनि एमाले पहिलो दल भएपछि नेतहरु नै चकित परेका छन्।
पदावधि सकिन लागेका १९ राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाले गठबन्धन गरेर साझा उम्मेदवारी दिएका थिए भने एमाले र राप्रपाले छुट्टै उम्मेदवार दिएका थिए।
बुधबार सातै प्रदेशमा भएको मतदानबाट १९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य थपिएका हुन्। महिलाबाट ७, दलितबाट ३, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकबाट २ र अन्य समूहबाट ७ जना सदस्य निर्वाचित भएका हुन्। निर्वाचित नयाँ सदस्यहरूको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ।
जसमध्ये १८ सिटमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भए भने एक सिट एमालेले रक्षा गरेको छ। प्रदेश एकबाट एक जना उम्मेदवारले एमालेबाट चुनाव जितेका छन्। यो सँगै एमालेले सकिन लागेको आफ्नो कोटाको ८ मध्ये १ सिटमात्र जोगाउन सफल भएको हो। बाँकी ७ सिट गुमाएको छ।
एमालेले गुमाएको सात सिट गठबन्धनका पाँच दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाले पाएका छन्। जसमध्ये कांग्रेसले ३, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले १-१ र जसपाले १ सिट बढाएका छन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि एक सिट पाएको छ। यति हुँदा पनि राष्ट्रिय सभाको ठूलो दल भने एमाले नै कायम रहनेछ। राष्ट्रिय सभामा २४ सिट मध्ये ७ सिट गुमाएको एमालेको अब १७ सिट भएको छ।
राष्ट्रिय सभामा दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र हो। आजको जितसँगै उसको १५ सिट पुगेको छ। तेस्रो ठूलो दल रहेको कांग्रेसको १० सिट पुगेको छ। त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीको ८, जसपाको ३ सिट र राजमोको १ सिट हुनेछ।
एमालेका ८, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका ४-४ र कांग्रेसका ३ सदस्यको पदावदी आगामी फागुन २० गते सकिँदैछ। आज कसले कहाँबाट जिते?
प्रदेश १ मा सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा (नेकपा एमाले) अपांगता वा अल्पसंख्यक, गोपाल बस्नेत, नेपाली कांग्रेस (अन्य), जयन्ती राई, एकीकृत समाजवादी (महिला) त्यस्तै मधेश प्रदेशमा उर्मिला अर्याल, नेकपा माओवादी केन्द्र (महिला), महम्मद खालिद सिद्धिकी र जनता समाजवादी पार्टी (अन्य) बाट जितेका छन् ।
त्यस्तै बागमती प्रदेशमा गोमादेवी तिमल्सिना, एकीकृत समाजवादी (महिला), कृष्णप्रसाद पौडेल, नेपाली कांग्रेस (अन्य), गण्डकी प्रदेशमा कमला पन्त, नेपाली कांग्रेस (महिला), सुरेश आलेमगर, माओवादी केन्द्र (अन्य) र भुवनबहादुर सुनार, माओवादी केन्द्र (दलित) बाट जितेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा युवराज शर्मा, नेपाली कांग्रेस -(अन्य), राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, नेकपा एकीकृत समाजवादी (महिला), तुलप्रसाद विश्वकर्मा, जनमोर्चा (दलित) र कर्णाली प्रदेशमा उदय बोहोरा, एकीकृत समाजवादी (अन्य), नरबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्र (अपांग/आदिवासी) र दुर्गाकुमारी गुरूङ, कांग्रेस (महिला) बाट जितेका छन् ।
उता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने नारायणदत्त मिश्र, नेपाली कांग्रेस (अन्य), मदन कुमारी शाह (गरिमा), नेकपा एकीकृत समाजवादी (महिला) र जगत पार्की, नेकपा माओवादी केन्द्र (दलित) बाट जितेका छन् ।
मधेसबाट राष्ट्रियसभामा माओवादी केन्द्रकी अर्याल निर्वाचित, देशभर अन्य को-को भए बिजयी ? राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा मधेस प्रदेशबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल निर्वाचित भएकी छन् ।
बुधबार भएको मतगणना अनुसार उनले ६ हजार १५६ मतभारसहित निर्वाचित भएकी हुन् । यस्तै माओवादीका तर्फबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रिक्त रहेका राष्ट्रियसभाको जगत पार्की बिजयी भएका छन्।
यस्तै राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका सुरेशबहादुर आले मगर र भुवन सुनार निर्वाचित भएका छन्। आलेले भने ३ हजार ९६ मत प्राप्त गरेका छन्।
गठबन्धनका साझा उम्मेदवार भुवन सुनारले एमाले अर्जुनकुमार सुनामलाई पराजित गरेका हुन्। सुनुवारले सुनामलाई ३०६ मतभारको अन्तरले पराजित गरेका हुन् । सुनारले ३०३० मतभार पाए भने सुनामले २७२४ मतभार मात्र प्राप्त गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेशसभाका ५९ सांसद, ८५ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी १६८ जनाले मतदान गरेका थिए। यस्तै उता कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नरबहादुर विष्ट निर्वाचित भएका छन्।